VMS okporo ụzọ ụgbọala na-adọkpụ- zuru agba
JCT VMS trailer trailer nwere ike igosipụta doro anya okporo ụzọ Ọnọdụ, na-eduzi ma na-eduzi okporo ụzọ, ọ na-nwere ndị na-esonụ uru: 1. Hapụ mberede ụzọ ozi oge iji belata okporo ụzọ mkpọchi; 2. Jiri ikuku, 4G na usoro nnyefe data ndị ọzọ iji jikọọ site na ikpo okwu njikwa okporo ụzọ; 3. Enwere ike ijikọ ya na ọtụtụ ogbugba ndu (NTCIP, TCP / IP, PROFIBUS, XML-OPC, wdg); 4. Ihuenyo nke VMS okporo ụzọ na-adọkpụ nwere ike ịhazi; Model VMS okporo ụzọ trailer-agba s ...
VMS okporo ụzọ na-adọkpụ ụgbọala-otu agba ihuenyo
JCT VMS okporo ụzọ ụgbọala na-adọkpụ （otu ihuenyo agba）, edebiri aha dị ka VMS n'ụwa, bụ ngwaọrụ dị mkpa maka ntọhapụ nke ọnọdụ okporo ụzọ na ozi nduzi okporo ụzọ. Ọ bụ ngwaọrụ ngosi ihe ọmụma gbasara okporo ụzọ yana ngwaọrụ ọkụ na-enwu ọkụ dị ka ihe ngosi ngosi, yana eserese na ọrụ ngosi ederede. batrị zuru ezu ebubo, gbochie ...
Taksi n'ahu windo gosiputa ihe e kwuru
The JCT Taxi n'azụ window ngosi usoro gafeworo na ezi uche imewe, elu na-eri arụmọrụ, anụ ngosi mmetụta, na-adaba adaba na mmezi.
2㎡ SOLAR Mobile Mobile LED TRAILER
Nlereanya: E-F2 SOLAR
2m2 anyanwụ mobile ada trailer （Model ： E-F2 Solar） adopts integrates anyanwụ ike, Ikanam n'èzí full-agba ihuenyo na mobile mgbasa ozi trailer. Ọ etịbede site gara aga mmachi na Ikanam mobile trailer na-achọta mpụga ike isi iyi ma ọ bụ na-ebu a generator maka ike ọkọnọ, na ozugbo adopts anyanwụ onwe ha ike ọkọnọ mode.
Nlereanya: E-F4 SOLAR
4m2 solar mobile trailer trailer （Model ： E-F4 SOLAR） firstly integrates solar, LED n'èzí zuru agba ihuenyo na mobile mgbasa ozi trailers ọnụ n'ime ihe organic dum.
6M Mobile Ikanam ụgbọala-IVECO
JCT 6M MOBILE Ikanam ụgbọala-IVECO （Model ： E-YWK3300） adopts IVECO Chassis; ngụkọta nke ụgbọala: 5995 * 2200 * 3200 mm; standardkpụrụ ọkọlọtọ mba: National Ⅴ / Ⅵ. Ejiri sofa, tebụl na oche, ihe nkwụnye ọkụ, ala aluminom, nke LCD TV na ọkwa ahaziri.
JCT 6m mobile exhibition truck-Foton Aumark （Model ： E-KR3360） na-eji akara ngosi dị elu nke Foton Motor Group "Aumark" dị ka chassis mobile, yana nnukwu ike "Cummins" ụwa, ọ nwere ohere ịnya ụgbọ ala sara mbara na mbara ọhụụ nke ọhụụ
8M Mobile Ikanam ụgbọala
JCT 8M mobile LED truck （Model ： E-W4800） nakweere chassis ụgbọ ala pụrụ iche nke Foton Aumark na mkpokọta ụgbọ ala bụ 8730 * 2370 * 3990mm. Enwere ike ịhọrọ ụgbọala dọkụmentị 8m a kwadebere iji kwenye ya na otu akụkụ ma ọ bụ ihu ihu abụọ na-acha ọkụ na-acha uhie uhie na nha ihu nha ruo 5440 x 2240mm nke enwere ike ibuli n'otu ma ọ bụ n'akụkụ abụọ. A ga-enwekwa ike ịmịnya ụgbọ mmiri na-akpaghị aka, ụgbọala Ikanam ga-aghọ ụgbọala na-agagharị agagharị mgbe ọkwa ga-apụta
6m ikanam ekwentị mkpanaaka - Foton Aumark
JCT 6m LED MOBILE TRUCK - Foton Aumark （Model ： E-W3360） gbanwetụrụ na Foton Aumark chassis na ikanam n'èzí zuru-agba ike-azọpụta ihuenyo. Ugbo ala nke E-W3360 LED MOBILE TRUCK bụ ihe na-erughị mita 6, ọ nwere ike ịnwe ikikere ma chụpụ
N'agbanyeghị ebe ọ dị na otu nsogbu gburugburu ebe obibi siri ike, ọ nwere ike ịrụ ọrụ ya mgbe niile n'ụzọ pụrụ iche. JCT 6m LED MOBILE TRUCK-Nanjing YueJin （Model ： E-SH2800） abụrụla onye mgbasa ozi mgbasa ozi ọhụrụ na - etinye mgbasa ozi na TV so dwumadi bi wɔ hɔ.
Mobile Ikanam Screen Truck, Mobile Dugara Billboard Truck, Dugara Mobile Trailer, Ikwute Mobile Truck, Ekwentị Mgbasa Ozi Ekwentị, Ikanam Mobile Truck N'ihi Sale,